Soosaarayaasha Soo-Saarayaasha Qalabka Xawaareynta Qalabka - Shiinaha Shiinaha Qalabka Soo-Saarayaasha Qalabka Xawaashida & Warshadaha
Khadka Soo-saarka Qalabka Xawaalidda
Khadka Wax Soo Saarka Elevator Escalator
Soo bandhigida Shirkadda
Qalabka kaalmaynta Escalator
Qalabka goluhu labajibaarayo
Khadka isku xidhka Escalator
Aruurinta goobta kulanka wacyigelinta goobta sawirka 5
1.2m khadka dhalaalaynta dharka dhalaalaya
1.6m khadka soosaarka dharka dhaldhalaalaya
Hordhaca Generaal * Khadkan waxsoosaarka wuxuu ka kooban yahay hal shaashad fidsan, molol fidsan dhalaalaya, suunka gudbinta, mashiinka dabaysha… iwm. * Waa otomatik buuxa laga bilaabo quudinta maaddada illaa gunta dhalaalaysa ee duudduuban, tikniyoolajiyad baaluq ah, orod aan caadi ahayn, PFE waxay gaari kartaa 95 iyo wixii ka sareeya. * Awooda waxsoosaarka laga bilaabo 1500kg, awooda waxsoosaarka saxda ah waxay kuxirantahay mashiinka wax soosaara iyo cabirida caaryada burqada. Cabbirka Farsamada 1.Model: HL-1600 2. Nooca Waxsoosaarka: Nooca Tooska ah ee Hoos Udhaca 3.Voltag ...
Loogu talo galay cirbadaha tooska ah iyo dib u soo celinta khadadka wax soo saarka meltblown ee macaamiisha oo leh tilmaamo gaar ah oo u dhexeeya 400mm - 1600mm. Khadka wax soo saarka dib-u-soo-celinta waxaa loo isticmaali karaa oo keliya soo-saarista dharka dharka meltblown, laakiin sidoo kale soo-saarka walxaha filterka dareeraha ah iyo qalabka filterka hawada. Qalabka filterka dareeraha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa dhinacyada daaweynta biyaha, batroolka iyo warshadaha kiimikada, oo leh qaab isku mid ah, saxnaan sareeya sare, saameyn muuqata, iyo awood ...
Qalabka kaabayaasha ugu weyn ee qodista iyo buufin soosaarka waa foornada madaxa nadiifisa. Ka dib markii la soo saaro muddo waqti ah, cilado wasakhda daloolka ah ayaa dhici doonta. Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in la beddelo mudista dillaacday oo dhinta. Bedelka cirbadaha ee madaxa dhinta wuxuu u baahan yahay in shaqada laga eryo si meesha looga saaro inta ku jirta polymer iyo nijaasta ku jirta madaxa dhinta. Mashiinka daboolka iyo lafdhabarta ayaa sida caadiga ah loo dubay si meesha looga saaro hadhaaga birta ah iyo nijaasta. Iyo walxaha ceeriin ee dhalaalaya -...
400-600 khadka soosaarka dharka dhaldhalaalaya
No 10 Wadada Hanma, Magaalada Linpu, degmada Xiaoshan, Hangzhou
Shirka Muhiimka ah ee Shaqaalaha
Hambalyo bogga cusub ee Han ...
Alaabada la Soo Bandhigay - Khariidadda Goobta